Njem mbụ na Hyperloop dị nso karịa ka a tụrụ anya | Akụkọ akụrụngwa
Otu izu gara aga, Elon Musk na ndị otu ya bipụtara na vidiyo, nyocha mbụ ha gara nke ọma banyere njem ha maka ọdịnihu, Hyperloop. O sina dị, onye isi ụlọ ọrụ dịka Tesla, SpaceX ma ọ bụ Blọ Ọrụ Na-agwụ Ike emeela ọkwa dị oke mkpa site na akaụntụ Twitter gị.
Nlere anya nke ọma Hyperloop ahụ pụtara na Mee gara aga. Ma, ọ bịaruteghị na July 12 n’ụdị vidiyo. Nnwale ahụ bụ ịnwale ihe niile ga-ebu capsule gọọmentị ga-ebu. Oke ọsọ ruru bụ 116 km / h na 5 sekọnd. Onu ogugu a bu ihe di anya na ihe Elon Musk kwuputara na akwukwo. Ọsọ ọsọ ịchọrọ inweta bụ 1.200 km / h (700 mph).
Ugbu a, mgbe ule mbụ ahụ gasịrị Ekwenyesiri ike na ma levitation system, usoro ngbagharị na tube agụụ arụ ọrụ zuru oke. Nzọụkwụ ọzọ ga-abụ itinye ihe niile emere na ihe nlereanya dabere na ezigbo capsule.
Agbanyeghị, dịka anyị kwurula, Elon Musk enweghị ike ịta ire ya. Ekwesiri ighota na ya na aru oru na netwok ndi mmadu, karisia banyere Twitter. Yabụ, ọ bụkwa ihe a na-ahụkarị iji nweta nkwupụta okwu gị. Ozi ọhụrụ na-ezo aka na Hyperloop bụ na ọ natala nkwenye sitere na gọọmentị iji wuo ọwara jikọtara New York na Washington DC. A ga-egwu ọwa a site na ụlọ ọrụ ya ọzọ Blọ Ọrụ Na-agwụ Ike. Ọ ga-ekwe omume ijikọ obodo abụọ ahụ naanị na 29 nkeji.
Mgbe ọkwa ọkwa bọmbụ a, ajụjụ ndị ahụ adịbeghị anya na-abịa. Na Ilọn Musk nwere ide ọzọ na akaụntụ Twitter ya. Oge a ka ọ kọwara nke a nkwekọrịta ahụ ka dị na ederede. Otú ọ dị, ma kwenyere na oge ga-adị mkpụmkpụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Njem mbụ na Hyperloop dị nso karịa ka a tụrụ anya ya
Site na obere mgbawa sitere na Microsoft ị nwere ike ịmepụta netwọkụ ntanetị gị na Raspberry Pi